Akụkọ Bible: Jehoshafat Atụkwasị Jehova Obi - Ebe Ndịàmà Jehova Na-edebe Ihe n’Ịntanet
Ị̀ MA ndị ndị a bụ na ihe ha na-eme? Ha na-eje ịlụ agha. Ndị ikom nọ ha n’ihu na-abụ abụ. Ma ị pụrụ ịjụ, sị: ‘Olee ihe mere ndị ahụ na-abụ abụ ejighị mma agha na ube ha ga-eji lụọ agha?’ Ka anyị hụ.
Jehoshafat bụ eze nke ebo abụọ nke alaeze Izrel. Ọ dịrị ndụ n’otu oge ahụ Eze Ehab na Jezibel nke alaeze ebo iri dịrị ndụ. Ma Jehoshafat bụ eze ọma, nna ya bụ́ Esa bụkwa eze ọma. N’ihi ya, ndị nọ n’ebo abụọ nke alaeze dị n’ebe ndịda nwere obi ụtọ na udo ruo ọtụtụ afọ.
Ma, ọ dị otu ihe merenụ nke mere ka egwu jide ha. Ndị ozi gwara Jehoshafat, sị: ‘Oké ìgwè ndị agha si ná mba Moab, Amọn, na Ugwu Sia na-abịa ibuso gị agha.’ Ọtụtụ ndị Izrel zukọrọ na Jeruselem iji chọọ enyemaka Jehova. Ha gara n’ụlọ nsọ Chineke, Jehoshafat wee nọrọ n’ebe ahụ kpegara Jehova ekpere, sị: ‘O, Jehova Chineke anyị, anyị amaghị ihe anyị ga-eme. Ike anyị na ìgwè ndị agha a ahaghị. Biko nyere anyị aka.’
Jehova ṅara ntị wee mee ka otu n’ime ndị ozi ya gwa ha, sị: ‘Ọ bụghị unu nwe agha ahụ, ọ bụ nke Chineke. Unu agaghị alụ ọgụ. Cherenụ ma hụ ka Jehova ga-esi zọpụta unu.’
N’ụtụtụ echi ya, Jehoshafat gwara ha, sị: ‘Tụkwasịnụ Jehova obi!’ O wee debe ndị na-abụ abụ n’ihu ndị agha ya. Ka ha na-agakwa, ha na-abụku Jehova abụ otuto. Ị̀ ma ihe mere mgbe ha ruru ọgbọ agha ahụ nso? Jehova mere ka ụsụụ ndị agha nke ndị iro ha lụrịta ọgụ n’etiti onwe ha. Mgbe ndị Izrel rutere, nke ọ bụla n’ime ndị agha ahụ bụ́ ndị iro ha anwụwo!
Ọ̀ bụ na amamihe adịghị ná ntụkwasị obi Jehoshafat nwere n’ebe Jehova nọ? Anyị ga-abụkwa ndị maara ihe ma ọ bụrụ na anyị atụkwasị Jehova obi.
1 Ndị Eze 22:41-53; 2 Ihe E Mere 20:1-30.
Ònye bụ Jehoshafat, oleekwa oge ọ dịrị ndụ?
N’ihi gịnị ka ụjọ ji jide ụmụ Izrel, gịnịkwa ka ọtụtụ n’ime ha mere?
Olee otú Jehova si zaa ekpere Jehoshafat?
Gịnị ka Jehova mere n’etiti ndị iro ụmụ Izrel tupu a lụọ ọgụ ahụ?
Olee ihe ndị anyị pụrụ ịmụta n’aka Jehoshafat?
Gụọ 2 Ihe E Mere 20:1-30.
Olee otú Jehoshafat si gosi ihe ndị ohu Chineke na-ekwesị ntụkwasị obi kwesịrị ime mgbe ha chere ọnọdụ ndị na-emenye egwu ihu? (2 Ihe 20:12; Ọma 25:15; 62:1)
Ebe ọ bụ na Jehova anọwo na-enwe òtù o ji eme ihe n’ịgwa ndị ya okwu, olee òtù o ji eme ihe taa? (2 Ihe 20:14, 15; Mat. 24:45-47; Jọn 15:15)
Mgbe Chineke ga-amalite ‘agha nke oké ụbọchị nke Chineke Onye Pụrụ Ime Ihe Niile,’ olee otú ọnọdụ anyị ga-esi yie nke Jehoshafat? (2 Ihe 20:15, 17; 32:8; Mkpu. 16:14, 16)
N’iṅomi ndị Livaị, òkè dị aṅaa ka ndị ọsụ ụzọ na ndị ozi ala ọzọ na-ekere n’ọrụ nkwusa ahụ a na-arụ n’ụwa niile taa? (2 Ihe 20:19; Rom 10:13-15; 2 Tim. 4:2)